Kukosha kwemubatanidzwa | CHIKAMU CHUNKAI
Enterprise Chinangwa: Sevhisi Yakatemerwa, Mutengi Kutanga
Sevhisi Yakatemerwa, Mutengi Kutanga.
Nguva dzose isa vatengi pakutanga.
Simbisa pfungwa ye "kugutsikana kwevatengi kuwedzera".
Funga kubva pamaonero evatengi, kurudzira zvirinani mhando, inoenderera uye inovandudzwa mutsara wechigadzirwa kune vatengi.
Bvumirana uye upe purofiti yedu kuona kugadziriswa kwemabhenefiti evatengi.
Enterprise Mishoni: Yepasirose YePamusoro Pack Solution Enterprises
Nekuvandudzwa kwebhizimusi rekambani, kambani yakabudirira kushandurwa kubva kune imwechete online modhi kuenda kune online uye isingaenzaniswi modhi, saka ichiva yekutanga online online kupakata bhizinesi muChina haichakwanise kusangana nekambani zvazvino zvido, uye kuva wepasi rose pack mhinduro bhizinesi rave chinhu chakanyanya kukoshesa Kunze kweChina, kune nyika.
Tenda kumba, upe mubairo munharaunda, ramba uchisimudzira kusimudzira kune hutano kwenzvimbo yakasvibirira yenyika
Guta rekumusha ndiwo moyo wenzvimbo yakanyorovera, ndiyo inonzi "sosi yemvura", kunyangwe isu hupenyu hwezuva nezuva uye tichishanda takabatikana, asi hatikanganwe guta ravo. Ichokwadi "kuziva nyasha" kunobva pamoyo, kuri kuyerera mukati Ropa remunhu, imhando yekudururwa kwechisikirwo uye kwechisikigo.Mufaro unogona chete kuwanikwa nekuona uye nekunakisa runako rwehupenyu uye nekuwana inonakidza yekunzwa ruzivo. Hupenyu hwakafanana nerwendo, uye murwendo, isu tinogara tichitenderera kubva kune imwe nhanho kuenda kune imwe poindi, uye tichitipa zvese, irwo nzanga.
Isu takazvipira kushandisa zvimwe zvakatipoteredza zvine hushamwari, zvakachengeteka, zvinodzikisira uye zvakaomarara zvigadzirwa zvemhando yepamusoro kupa vatengi kuwanda kwenguva refu kushandira pamwe nebasa. Nekuziva kwekutakura kwakasvibirira, tinosarudza zvinhu zvakanaka zvekushandurwa kwenzvimbo dzepasi uye tinoita mipiro ine mwero mukusimudzira kwakanaka kwenzvimbo yepasi.
Basa rakavimbika, Kuvimbika, Kushanda nesimba, Kudzidza uye Kugadzira
Vanhu vasina kuvimba uye vasina kusimbiswa, mabhizinesi asina kuvimbika haasvike.Kuvimbika, iko kuzvibata ibasa, ndiyo tsika yetsika yakawedzera, kuvimbika ndiko kwedu chunkai hunhu hwakanaka, isu chunkai vanhu vanogara vachitaridzika zvakafanana, kutendeseka uye chengeta vimbiso. Kambani inoda mushandi wese kuti ave munhu akavimbika uye akavimbika.Kutendeseka inzira yedu yehunhun vanhui yemaitiro, chunkai nzira yevanhu yekuita zvinhu. Kushanda nesimba rudzi rwemabhizimusi mweya, ndiko kuti, mukurwa nematambudziko nematambudziko, fambira mberi, fambira mberi, bhizinesi rakaoma. Basa rakaomarara kuzvipira, ndiko kuti, kuti kambani ibatsirike kupa. ndiye murume anogara achienderera nebasa rake kubva pakutanga. Isu tinofanirwa kuchengetedza mweya wekudzidza nehunyanzvi, kusagadzikana mune ino mamiriro, tichifunga mune ramangwana, chengetedza kufambira mberi zuva rega rega, kuitira kusimudzira kusimukira kwebhizinesi rakachengetedzwa kurwisa kushanda.